Nhau - Smart e-bhasikoro ndiyo inoitika mumusika
Smart e-bhasikoro ndiyo inoitika mumusika
Nekukurumidza kukura kwesainzi uye tekinoroji, zvine hungwaru, zvirinyore uye zvinokurumidza zvigadzirwa zvave zvidikanwi zvakakosha muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva. Alipay uye Wechat Pay vanoita shanduko huru uye vanounza zvirinyore muhupenyu hwezuva nezuva hwevanhu. Parizvino, kubuda kwema smart e-mabhasikoro kwakatonyanya kudzika midzi mumoyo yevanhu. Ipo iyo e-bhasikoro iine chaiyo-nguva yekumisikidza, zvinokwanisika kudzora iyo-bhasikoro kuburikidza neAPA pasina kuitauyai kiyi kana uchibuda. Kana uchisvika pae-bhasikoro, inogona kuona induction, kuvhura uye akateedzana mashandiro.
Muhupenyu hwezuva nezuva, kutakura kwakakosha kwazvo. Nekupararira kweCOVID-19 uye kuwanda kwemotokari, e-mabhasikoro maviri-mavhiri ndiyo yave nzira inosarudzika yekutakura kune vanhu vari vega e-mabhasikoro uye mapfupi- nepakati-marefu kufamba. Uye e-mabhasikoro akangwara, akawanda anoshanda ave mamiriro anodikanwa kuti vanhu vatenge, uye vanhu havazosarudze nzira yechinyakare inonetsa yekushandisa sepakutanga. Zvinotora nguva yakawanda kuti ubude kunotsvaga kiyi yekuvhura, uye kutokanganwa kukiya iyo e-bhasikoro, kurasikirwa nekiyi, uye kuwana iyo e-bhasikoro, izvo zvinowedzera njodzi yekubiwa kwepfuma.
Parizvino, stock yemaviri-mavhiri e-mabhasikoro muChina yasvika mamirioni mazana matatu. Kuunzwa kweiyo nyowani yenyika mureza uye kusimudzira kwehungwaru kwakasimudzirawo mutsva mutsva wema-mavhiri maviri e-mabhasikoro. Vagadziri vakuru vakavhurawo zvigadzirwa zvitsva maererano nehungwaru hwechigadzirwa. Kutenderera kwemakwikwi, kugara uchitangisa zvigadzirwa zvitsva zvinoshanda kutora mikana yemusika. Kunyangwe Master Lu akaitisa nehungwaru kuongororwa kwee-mabhasikoro, achimhanya mamaki zvichienderana nekusiyana kwemabasa akangwara. Kune imwe nhanho, vatengi vanozotarisa kune smart kuongorora uye vanosarudza kutenga mota, uye mwero wehungwaru unokanganisa musika.